Fursado shaqo oo loo siman yahay / Takoor la'aan
Waxaan aaminsanahay in dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha shaqaalayntu ay ku saleysnaadaan awoodda shaqsi ee uu ku qaban karo shaqada oo uusan ku dhisnayn astaamo shaqsiyeed ama waxa uu aaminsan yahay. Waxaan shaqaalaha siineynaa jawi shaqo oo ka madax banaan takooris, dhibaateyn, cabsi gelin ama qasab la xiriira si toos ah ama si dadban oo jinsiyadeed, diin, ujeedo galmo, fikrad siyaasadeed ama naafonimo.
Uma adeegsanno wax xabsi ah, addoon ah, aan ku jirno qasab ama shaqo khasab ah soo saarista wax soo saarkeenna.
Uma adeegsanno ku shaqeysiinta carruurta soo saarista wax soo saar kasta. Ma shaqaalaysiinno qof da'diisu ka yar tahay 18 sano, ama da'da ay ku dhammaatay iskuulka khasabka ahi, hadba kan weyn.
Waxaan ilaalinaa saacadaha shaqada ee macquulka ah iyadoo lagu saleynayo xaddidaadda saacadaha caadiga ah iyo kuwa dheeraadka ah ee uu oggol yahay sharciga maxalliga ah, ama meesha sharciga deegaanka uusan xadidneyn saacadaha shaqada, usbuuca shaqada ee caadiga ah. Waqtiga dheeraadka ah, marka loo baahdo, waxaa si buuxda loo magdhabayaa sida uu qabo sharciga maxalliga ah, ama ugu yaraan ugu yaraan u dhigma heerka magdhowga saacadlaha ah ee caadiga ah haddii aanu jirin qaddar cayiman oo sharci ahaan loo qoray. Shaqaalaha waxaa loo ogol yahay maalmo fasax oo macquul ah (ugu yaraan hal maalin oo nasasho ah toddobadii maalmoodba mar) waxayna ka baxaan mudnaanta.
Waxaan qireynaa qiimaha shaqaalaheena waxaanan ula dhaqmeynaa shaqaale kasta sharaf iyo qadarin. Uma adeegsano arimo anshax xumo ah oo aan caadi ahayn sida hanjabaadaha rabshadaha ama noocyada kale ee jir ahaaneed, galmo, maskaxeed ama dhibaateyn afeed ama xadgudub.
Waxaan si cadaalad ah u abaalmarinaa shaqaalaheena anaga oo u hogaansamayna dhamaan sharciyada khuseeya, oo ay ku jiraan sharciyada mushaharka ugu yar, ama mushaarka warshadaha maxaliga ah ee jira, hadba kan ka sareeya.
Waxaan ilaalinaa jawi nabdoon, nadiif ah oo caafimaad qaba iyadoo la raacayo dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo. Waxaan bixinaa tas-hiilaad caafimaad oo ku filan, musqulo nadiif ah, helitaan macquul ah oo biyo la cabi karo, xarumo caafimaad oo si fiican u shidan oo hawo leh, iyo ka ilaalinta waxyaabaha ama xaaladaha halista ah. Heerarka isku midka ah ee caafimaadka iyo badbaadada ayaa lagu dabaqayaa guri kasta oo aan u siino shaqaalaheena.
Ka walwalka deegaanka
Waxaan aaminsanahay inay tahay waajibaadkeena ilaalinta deegaanka waxaanan tan ku sameeynaa adoo u hogaansamaya dhamaan sharciyada iyo xeerarka deegaanka ee khuseeya.
Waa siyaasadeena inaan ka mamnuuco shaqaalaha inay galaan macaamil ganacsi xasaasi ah - macaamil ganacsi guud ahaan loo arko inuu yahay mid sharci darro ah, anshax xumo ah, anshax xumo ah ama ka tarjumaya sharfta shirkadda. Macaamilladani badanaa waxay ku yimaadaan qaab laaluush, dib-u-celin, hadiyado qiimo weyn leh ama lacag-bixinno loo sameeyay si loogu roonaado saamaynta qaar ka mid ah go'aannada saameeya ganacsiga shirkadda ama dan shaqsiyeed ee shaqsi.
Waxaan ka mamnuuceynaa shaqaalaha inay helaan, si toos ah ama si dadban, wax qiimo leh taas bedelkeeda isticmaalka ama ogolaanshaha isticmaalka booskiisa ama shaqadeeda anfaca qofka kale. Sidoo kale, laaluushka ganacsiga, dib-u-celinta, abaal-marinta iyo bixinta kale iyo faa'iidooyinka la siinayo macmiil kasta waa mamnuuc. Si kastaba ha noqotee, tani kuma jirto kharashyada qaddarka macquulka ah ee cuntada iyo madadaalada macaamiisha haddii ay si kale sharci u yihiin, waana in lagu daraa warbixinnada kharashka oo lagu oggolaadaa nidaamka shirkadda caadiga ah.
Xakamaynta Xisaabinta, Nidaamyada iyo Diiwaanada
Waxaan si sax ah u xafideynaa buugaagta iyo diiwaannada dhammaan macaamillada iyo sida loo oggol yahay hantideena sida sharcigu u baahan yahay, iyo sidoo kale inaan ilaalino nidaamka xakamaynta xisaabaadka gudaha si loo hubiyo kalsoonida iyo ku-filnaanshaha buugaagteenna iyo diiwaanadeena. Waxaan hubineynaa kaliya macaamil ganacsi oo leh ogolaanshaha maareynta saxda ah in lagu xisaabtamo buugaagteenna iyo diiwaanadeena.
Adeegsiga iyo Bixinta Macluumaadka Gudaha
Waxaan si adag u mamnuucaynaa in macluumaadka gudaha macluumaad loo bandhigo dadka ka tirsan shirkadda ee boosaskoodu u diidayaan helitaanka macluumaadkaas. Macluumaadka gudaha ku jira waa xog kasta oo aan si guud loo soo bandhigin.
Waxaan taxadar dheeraad ah siineynaa si aan u ilaalino kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisheena. Marka, waxaan ka mamnuucaynaa shaqaalaha inay shaaciyaan macluumaad sir ah ama lahaansho oo ka baxsan shirkadda oo waxyeello u geysan kara macaamiisheena, ama Shirkadda lafteeda. Macluumaadka noocan ah waxaa lala wadaagi karaa oo keliya shaqaalaha kale iyadoo loo eegayo baahida loo qabo in la ogaado.
Waxaan u qorsheynay siyaasadeena si aan u tirtirno isku dhaca u dhexeeya danaha shaqaalaha iyo Shirkadda. Maaddaama ay adag tahay in la qeexo waxa ka mid ah iskahorimaadka danaha, shaqaaluhu waa inay u nuglaadaan xaaladaha soo kicin kara su'aalaha ama iska horimaadyada muuqda ee u dhexeeya danaha shaqsiyadeed iyo danaha Shirkadda. Adeegsiga shakhsi ahaaneed ee hantida Shirkadda ama helitaanka adeegyada Shirkadda ee loogu talagalay faa'iidada shakhsiga ah waxay noqon kartaa isku dhac danaha.
Khiyaano iyo Ciqaab la aan la mid ah
Waxaan si adag u mamnuuceynaa waxqabad kasta oo been abuur ah oo dhaawici kara macaamiisheenna iyo alaab-qeybiyeyaasha, iyo sidoo kale Shirkadda. Waxaan raacnaa nidaamyo gaar ah oo khuseeya aqoonsiga, warbixinta iyo baaritaanka waxqabadyada noocaas ah.
Kormeerka iyo u hogaansanaanta
Waxaan qaadnaa barnaamij kormeer dhinac saddexaad ah si aan u xaqiijino u hoggaansanaanta Shirkaddu Xeerkan Anshaxa. Hawlaha kormeerka waxaa ka mid noqon kara kormeerka warshadda ee lagu dhawaaqay oo aan la sii shaacin, dib u eegista buugaagta iyo diiwaanada la xiriira arrimaha shaqada, iyo wareysiyada gaarka ah ee shaqaalaha.
Kormeerka iyo Dukumiintiyada
Waxaan u xilsaarnaa mid ama in ka badan saraakiisheenna inay kormeeraan oo ay caddeeyaan in la ilaalinayo Xeerka Anshaxa shirkadda. Diiwaanada shahaadadan waa inay heli karaan shaqaalaheena, wakiiladeena, ama dhinacyada seddexaad markay codsadaan.
Waxaan si adag u raacnaa oo aan ixtiraamnaa dhammaan xuquuqda Hantida Caqliyeed inta lagu gudajiro qabashada ganacsigeenna guud ahaan suuqyada adduunka iyo gudaha.